Wikipedia:Maqaal Xul Ah Bogga Hore/13 - Wikipedia
Wikipedia:Maqaal Xul Ah Bogga Hore/13
< Wikipedia:Maqaal Xul Ah Bogga Hore
Antarktika (; ; loogu dhawaaqo: i/ˈɑrktɪkə/ iyo /ˈɑrtɪkə/) waa qaarada ugu xigta koonfurta Aduunka, taasi oo juquraafi ahaan noqoneysa Cidhifka Koonfureed ee dhulka. Qaarada Antarktika waxay ka mid tahay gobolka Antarktik ee waaxda koonfureed ee dhulka, taasi oo qeyb ka yihiin Iskuwareega Antarktik iyo Bada Koonfureed. Baaxada dhulka Antarktika waa mid aad u balaadhan, waxaana lagu qiyaasay 14.0 milyan kilomitir labo jibaaran (5.4 milyan mayl labo jibaaran), taasi oo ka dhigeysa qaarada shanaad ee ugu weyn aduunka - waxaa ka weyn Afrika, Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Koonfur Ameerika.
Hadii Antarktika la barbardhigo qaarada Ustareliya weey ku labo laabmaysaa, taasi micnaheedu waa in Ustareliya le'egtahay kala badh Antarktika. Sida la ogyahay ilaa 98% qaarada Antarktika waxaa qariyahay baraf kaasi oo leh dhumuc dhan 1.9 kilomitir (1.2 mayl), kuna fidsan dhamaan deegaanada qaarada marka laga reebo qeybta waqooyi oo kali ah.
Isku celcelis, qaarada Antarktika waa tan ugu qaboow, qalalsan, ee ugu dabaysha badan qaaradaha caalamka oo dhan. Sidoo kale waxay leedahay deegaano badan oo ugu dhaadheer jooga dhulka. Juquraafi ahaan marka laga hadlayo deegaanada Antarktika waxaa lagu tiriyaa lamadegaan (saxare), sababtoo ah waxaa ka da'a roob aad u yar oo mararka qaar ka yar 200 mm (8 in) kaasi oo ku da'a deegaanada xeebaha oo kali ah. Sidoo kale waxaa xusid mudan heerkulka Antarktika, wuxuu inta badan yahay −89 °C (−129 °F), in kastoo marka la iskucelceliyo guud ahaan noqonayso −63 °C (−81 °F).
Guud ahaan, qaarada Antarktika waa meel aan la kala lahayn (de facto), laakiin waxaa maamula oo gacanta ku haya dowladaha saxeexay "Nidaamka Heshiiska Antarktika". Heshiiskaasi waxaa sanadkii 1959kii saxeexay labo iyo toban wadan, wakhtiyadii ka dambeeyayna waxaa saxeexa ku biiray ilaa 39 wadan kale. Heshiiskaasi wuxuu meesha ka saarayaa in qaarada Antarktika loo isticmaalo siyaabo milatari, in hubka lagu tijaabiyo, in wasakhda hubka lau aaso ama la keeno, in la taageero ajandaha cilmi-baadhista, in macdan laga qoto iyo in la ilaaliyo hawada nadiifta ah ee qaarada. Wadanadii ugu horeeyay waxaa ka mid ah Arjantiina, Ustareliya, Beljimka, Jili, Faransiiska, Jabaan, New Zealand, Norway, Koonfur Afrika, Ruushka, Ingiriiska iyo Maraykanka Cilmibaadhista ka socota qaarada waa mid caalami ah oo ilaa 4,000 aqoon yahay oo caalamka ka kala socda joogaan. (SII AQRI)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maqaal_Xul_Ah_Bogga_Hore/13&oldid=147856"
Maqaal Xul Ah Bogga Hore
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Sebteembar 2015, marka ee eheed 00:16.